UDkt Veron Ramsuran noDkt Lenine Liebenberg.
Ososayensi base-UKZN Bangene Ku-Top 40 ye-African Academy
Abacwaningi abanegalelo elihle base-KRISP eKolishi Lezifundo Zezempilo e-UKZN, uDkt Veron Ramsuran noThisha omkhulu wase-UKZN uDkt Lenine Liebenberg, baqokelwe ukuba ngamalunga e-African Academy of Sciences (i-AAS). Labo sosayensi abangama-40 bavela emazweni ayi-19 ezifundeni ezinhlanu zase-Afrika bazoqeqeshwa iminyaka emihlanu. Bane kuphela ososayensi baseNingizimu Afrika abakhethelwe kulolu hlelo olukhulu, kuthi ababili kube ngabase-UKZN nowesithathu ongumfundi wakudala wase-UKZN (uDkt Philiswa Nomngongo).
U-Ramsuran uthakasile ngalezi zindaba. ‘Bekuwuhlelo olunzima lokukhethwa kwazise bekunezicelo ezingaphezu kwama-300 zabantu base-Afrika yonke. Bane kuphela abaseNingizimu Afrika abakhethiwe, sibathathu esihlobene ne-UKZN! Kuncomeka kakhulu ukubona i-UKZN iphumelele kahle kangakakulolu hlelo olunzima noluhlonishwayo.’
U-Ramsuran wathola iziqu zobudokotela e-University of KwaZulu-Natal, lapho ayecwaninga izinto eziningi ezithinta igciwane lengculazi. Ngesikhathi enza iziqu zobudokotela wayethekela emagumbini okuhlola aphesheya amabili okuyi-Fred Hutchinson Cancer Research Center ne-University of Texas Health Science Center e-San Antonio. Ngemva kokuqeda izifundo zobudokotela, waqashwa yi-Institute of MGH, MIT and Harvard. Ngemva kokusebenza iminyaka emihlanu kulezi zikhungo, u-Ramsuran wabuyela eNingizimu Afrika nase-KRISP e-UKZN. Manje ungumholi wethimba kwi-KwaZulu-Natal Research Innovation and Sequencing Platform (i-KRISP), i-associate scientist e-Centre for the AIDS Programme of Research in South Africa (i-CAPRISA) ne-UK Royal Society Future Leader African Independent Research (i-FLAIR) Fellow. Ziningi izikhundla anazo ezikhungweni ezihlonishwayo emhlabeni njenge-Ragon Institute of Harvard, i-MIT ne-MGH , kanjalo ne-National institute of Health (i-NIH) eMelika.
Umsebenzi kaRamsuran ugxile ekubhekeni umthelela wolibofuzo lomuntu emagciwaneni esandulelangculasi nesifo sofuba. Unothando kakhulu lokucwaninga ulibofuzo lwe-Human Leukocyte Antigen (i-HLA). Usanda kucwaninga umphumela we-HLA ehlukile kwisandulelangculazi negciwane lesifo sofuba, okwashicilelwa kwi-Science. Uphinde abe nothando ezintweni ezinomthelela ekwahlukeni kwe-HLA.
U-Ramsuran unezinto azenzayo ngaphandle kwezemfundo. Unezingane ezintathu ezazalwa ngenkathi eqeqeshwa kanzulu eMelika. Ushade nongoti wezenhlanzeko yamazinyo u-Radhika Ramsuran, odabuka eThekwini. Nakuba ake wanunuselwa ngomsebenzi yizikhungo ezinkulu zaseMelika kodwa wakhetha ukubuyela eNingizimu Afrika ukuze izingane zakhe zizoba seduze komndeni nabangani. Uthanda ukuchitha isikhathi sakhe santambama ezishayelwa umoya ngasolwandle laphoabantwana bakhe bezidlalela amabhayisikili nomndeni nabangani.
U-Liebenberg owusosayensi e-Centre for the AIDS Programme of Research in South Africa (i-CAPRISA) Mucosal Immunology Laboratory. Uyilunga le Future Leaders – African Independent Researcher (FLAIR), waklonyeliswa nge-SANTHE Path to Independence, ungumeluleki wabafundi abathathu abenza iziqu zobudokotela e-Kolishi Lezifundo ZezempiloCollege of Health Sciences yase-UKZN.
Uqeqesho lukaDkt Liebenberg kwi-virology, microbiology, genetics ne-immunology luhola ucwaningo lwakhe ukuthi lubheke indlela umzimba olwa ngayo nezifo. Useke wabhala ngezindlela zokuphucula ucwaningo lokwelapha isandulelangculazi. Ucwaningo lwakhe lwalugxile eqhazeni lokungabi bikho kwenhlanzeko ebantwini besifazane ekubhebhethekeni kwesandulelangculazi nokuqhamuka nezindlela ezisebenzayo ukugwema ingculazi.
Ngokuka-Liebenberg, i-Affiliateship iwukubona umsebenzi wakhe wocwaningo, indlela yokutshala ekuphuculeni ezempilo ngocwaningo. Lo mama wezingane ezimbili wethemba ukuthi impumelelo yakhe izokhuthaza abanye abantu besifazane ukuthi benze abakuthandayo nomsebenzi wabo kwezesayensi.
Ngokuhlonipha osasayensi abasafufusa abakhombisa ubuchule emsebenzini wabo, i-AAS ihlose ukwenza ingosi ezokhuthaza abacwaningi abancane abanevuso lokusebenza endimeni yezesayensi. Okokugcina, izinhlelo ze-Affiliates zihlose ukukhiqiza ososayensi abaphelele abaveza kahle izinto i-AAS ezimele, okuwukuhamba phambili, uzwelo, ukwehluka nobuqotho.
UDkt Judy Omumbo, iMenenja yeziNhlelo-ze-Affiliates and Postdoctoral Programmes, uthe: ‘Kumnandi ukubona kwanda ukuhlonishwa kwesayensi ezinhlelweni zentuthuko ye-Afrika. Abacwaningi abancane basendaweni efanele ukuqhamuka namasu amasha ocwaningo okuyoqinisekisa ikusasasa elihle ebantwini naseminothweni kubantu base-Afrika. Uhlelo lwe-AAS Affiliates lukhiqiza umphakathi wongoti base-Afrika ngempela lomhlahlandlela wezinhlelo kanti sijabule ngokubona iqoqo lesihlanu lase-AAS Affiliates lijoyina abalingani balo abevile kuma- 80 kulo msebenzi.’
Amagama: u-MaryAnn Francis
DHET Urges Staff and Students to Prioritise their Health and Wellness